अर्थनीति « Clickmandu
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको राम्रै चर्चा भयो । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको व्यापार व्यवसायको विस्तार तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि मौद्रिक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन यथार्थपत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा गर्दा अनावश्यक आतंक सृजना भएको बताएका छन् । । राष्ट्रिय योजना आयोगका
एक वर्षमै झण्डै ५०% बढीले घट्यो विद्युत् प्राधिकरणको नाफा
काठमाडौं । कुनै समय घाटाको मात्रै व्यापार गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्ला केही वर्ष नाफाको पनि व्यापार गर्यो । कुलमान घिसिङको सबल नेतृत्व, सबै कर्मचारीको मेहनतको परिणाम स्वरुप प्राधिकरणले सरकारी
काठमाडौं । विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै बालबालिकालाई अध्ययन मात्र होइन, घोकाएर कण्ठ गर्न लगाइने पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण वाक्य हो, ‘नेपाल कृषिप्रधान देश हो ।’ मुलुकका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषि पेशामा
अर्थमन्त्री शर्मालाई ३ पूर्वअर्थमन्त्रीको सुझाव : अध्यादेश मार्फत आएको बजेटलाई संसोधन गरेर कार्यान्वयन गर्नुहोस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती र समस्याहरु तथा तिनको सम्बोधनका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारहरुका सम्बन्धमा सुझाव लिन भन्दै तीनजना पूर्वअर्थमन्त्री भेटेका छन् । शर्माले आइतबार पूर्व
युवराज खतिवडाको जस्तो झुटको पुलिन्दा नहोस् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको श्वेतपत्र
काठमाडौँ । निर्वाचनमार्फत् भर्खर सरकार गठन भएको थियो । तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै दुइतिहाई जनमत प्राप्त गरेपछि त्यसको राप र तापका बीचमा आफूलाई अर्थतन्त्रको ज्ञाता बताउने डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता
काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षका अवधिमा डेढ खर्ब स्वदेशी लगानीका उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ खर्ब ५६ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँको लगानीमा विभिन्न ६ शीर्षकका
काठमाडौं । भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाएका छन् । गत आर्थिक वर्षदेखि नै तीन तहकै सरकारको समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भने पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे
आयात २८% ले बढ्दा निर्यात ४४ % ले बढ्यो, ४ खर्ब राजश्व संकलन
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८.६६ प्रतिशतले आयात बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात गरेकोमा
आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख ५ क्षेत्र, सहुलियत र प्रोत्साहन आवश्यकः प्रतिवेदन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा सुहलियत प्रदान गरेमा ५ क्षेत्रमा पूर्णरुपमा आत्मनिर्भर उद्योग मन्त्रालयको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उद्योग विभागले
ओरियन्टल पीडितलाई गुण्डुको १६४ रोपनी जग्गा बाँड्दै सुधीर बस्नेत, कित्ताकाट र प्लटिङको तयारी
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी हिनामिना काण्ड मानिने ओरियन्टल कोअपरेटिभ प्रकरण व्यवस्थापनको काम
संसदमा बाेल्दै दाहालले सोधे- के नयाँ सरकार आएपछि सुकुम्बासी सकिएका हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विषयमा सांसदहरुले संसदमा आवाज उठाएका